Dowladda Puntland oo Sheegtay Inaysan Wadahadal ka galayn xaaladda gobolka Sool | SAHAN ONLINE
Dowladda Puntland oo Sheegtay Inaysan Wadahadal ka galayn xaaladda gobolka Sool
GAROOWE – Guddiga Difaaca Puntland ayaa maanta kulan ku yeeshay magaalada Garoowe kaasoo ay uga hadleen xaaladda deegaanada gobolka Sool ee xiisada dagaal ka taagan tahay ee Puntland iyo Somaliland.
Afhayeenka Xukuumadda Puntland Cabaahi Jaamax Quraan-jecel ayaa sheegay in aysan jirin wada xaajood ay ka galayaan xoreynta deegaanada gobolka Sool.
Wasiiru-dowladda Madaxtooyadda ahna Afhayeenka Xukuumadda Puntland ayaa sheegay in uusan jirin wadahal ay Dowladda Federaalka Soomaaliya ay kala galayso Puntland gobolka Sool.
Waxa uu sheegay in taasi ay tahay hawo been ah oo uu iska dhaadhiciyay Muuse Biixi in ay dowladda Federaalka kala xaajooneyso Somaliland dhulka Puntland.
Wasiirka Arrimaha gudaha Puntland Cabdullaahi Jaamac Xirsi Timacade ayaa mahadcelin u jeediyay shacabka gobolka Sool ee mudaharaadka ku muujiyay rabitaankooda ku aadan Puntland.
“….Kuwii diidey Dowladdii Soomaaliyeed in ay xukunto ee qoriga kala horyimid ayaa maanta dadka ku dilaya waan idinku xukumeynaa oo qori ayaan idnku haysaneynaa, taas cid ka yeeleysaa ma jirto ayuu yiri Timacadde.
Wasiirka Amniga Puntland Axmed Cabdulahi Yusuf Dowlad ayaa isna bogaadiyey doorkii Ciidanka Puntland ay ka qaateen dagaalkii ay Somaliland la galeen ee ka dhacay Tukaraq,waxa uu sheegay in ay guulo la taaban karo ka gaareen.
…..”Dagaalka in ay bilowdey Somaliland cid kastana waa og tahay in ay soo duushey, sidaas darteed dagaalku waa soconayaatan iyo inta Sool laga xoreynaayo…” ayuu yiri Wasiirka Amniga.
Wasiirka Warfaafinta Cabdi Xirsi Cali(Qarjab) ayaa ugu dambeyb bulshada ku booriyey in ay ilaashadaan sharaftooda iyo jiritaankooda,isla markaana ay ay ka hortagaan qorshe kasta oo uu soo abaabulo Maamulka Soomaali-diidka ah ee Somaland.
….”Waxa aad moodaa in uu la hadlayo dad aalan iyo kuwo aan waxba kala ogeyn, marka uu lee yahay Dowladda federaalka ayaan wada xaajood kula jiraa waa riyo maalmeed..”ayuu Qarjab
Guddiga difaaca Puntland ayaa ku booriyay bulshada gaar ahaana kuwa ku sugan deegaanada gobolka Sool iney garab istaagaan ciidanka difaaca Puntland si guul looga gaaro xoreynta dhulka ay haysato Somaliland.